ढोका खोलेर दिल्ली फर्किए शृंगला | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ढोका खोलेर दिल्ली फर्किए शृंगला
मंसिर १३ गते, २०७७ - ०८:५०
काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच १५ महिना लामो कूटनीतिक संवादहीनता अन्त्य गर्दै र राजनीतिक तहमा औपचारिक संवादको ढोका खोलेर भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला शुक्रबार दिल्ली फर्केका छन् । अब मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमालगायत सुल्झिन बाँकी द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – नेपालमा परिचयात्मक भ्रमणका क्रममा आएका शृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरका तर्फबाट भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन् । मंसिर अन्तिम साता दिल्लीमा बस्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जाने गरी तयारी भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो भारत भ्रमणबारे दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले तयारी गरिरहेको बताए ।
दिल्लीमा आयोगको छैटौँ बैठक बस्न लागेको छ भने वर्तमान सरकारका पालामा दोस्रोपटक आयोगको बैठक बस्न लागेको हो । गत ४ भदौमा आयोगको पाँचौँ बैठक भएको थियो, जसको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र जयशंकरले गरेका थिए ।
आयोगको पाँचौँ बैठकमा पनि कालापानी र सुस्ताको समाधानमा नेपालले जोड दिएको थियो । यसैगरी इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रमुखले बुझ्नुपर्ने नेपालको अडान थियो । अबको बैठकमा पनि नेपालले यो विषय उठाउने तयारी भइरहेको छ ।
सशक्त सहकार्यमुखी सम्बन्ध चाहन्छौं : शृंगला
‘हामी भारत र नेपालका भावी पुस्ताप्रति जवाफदेही छौँ । घनिष्ठ मित्रका रूपमा हामीले सँगै काम गर्नु आवश्यक छ,’ विदेशसचिव शृंगलाले भने, ‘सशक्त सहकार्यमुखी नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवै देशको हितमा छ ।’ उनले भारतको आर्थिक समृद्धि तथा उचाइसँग छिमेकी र मित्रका रूपमा नेपाल समेत जोडिएको उल्लेख गरे ।
सीमापार रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी, सीमापार पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइनमा असाधारण सहकार्य भइरहेको समेत उनले टिप्पणी गरे ।
मंसिर १३ गते, २०७७ - ०८:५० मा प्रकाशित